Kaoperativa Tselatra: hiakatra 500 Ar ny saran-dalana | NewsMada
Kaoperativa Tselatra: hiakatra 500 Ar ny saran-dalana
Nanapa-kevitra ny hampiakatra ny saran-dalana ho 500 Ar ihany koa ny kaoperativa Tselatra. Hanomboka amin’ny 18 desambra izao ny fampiharana izany saran-dalana vaovao izany. Ity kaoperativa ity izay tsy nampiakatra saran-dalana niaraka tamin’ny FMA fa nitana ny saran-dalana tokana 400 Ar teo aloha.
Na izany aza, betsaka ireo nimenomenona tamin’ity saran-dalana tokana ity satria na toerana akaiky aza dia tsy maintsy 400 Ar no aloa. Heverina hisy indray izany ny sara-dalana 300 Ar ho an’ity kaoperativa ity amin’izao fiakaran’ny saran-dalana izao.
Tafiditra ao anatin’ny kaoperativa Tselatra ny zotra 147, 146, 178,147 Bis, 147D…. Manana ny fitsipika mifehy azy ity kaoperativa ity, saingy tsy maharitra ny fanajana ny fitsipika fa misy ihany ny gaboraraka, indrindra rehefa amin’ny fotoana maha be olona.
Mampitaraina ny mpandeha ihany koa ny hafetsen’ireo mpitatitra amin’ny famafana ny ampahany amin’ny laharan’ny finday mipetaka any anaty taxi-be hahafahana mitaraina amin’izay tsy fanarahan-dalàna ataon’izy ireo. Eo ko ny fihodinana an-dalana….
Tsiahivina ihany koa fa ampihatra ny fampiakarana ny sara-dalana, manomboka androany, ny zotra 119 izay anisan’ny be mpandeha ihany koa eto Antananarivo.